आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने – Sandesh Munch
ब्यालेन्स कम भएर फोन गर्न असमर्थ नम्बरका लागि जिरो ब्यालेन्स प्याकेजमा २५ वटा अन–नेट एसएमएस, ५० मिनेट अन–नेट भ्वाइस, १०० एमबी डाटा, प्याकेजको अवधि सात दिनको हुनेछ । यस प्याकेज आगामी दुई दिनसम्म उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।सो प्याकेजको प्राप्त गर्ने ग्राहकलाई एसएमएसमार्फत जानकारी पठाइने, उक्त एसएमएसको निर्धारित जवाफ एसएमएसमार्फत पठाएर प्याकेज लिन सकिने, सो प्याकेज लिन अयोग्य नम्बरमा पनि प्याकेज प्रदान गर्न नसकिएको सन्देश पठाइ जानकारी गराइने छ । उक्त प्याकेज कम्पनीका जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड ग्राहकलाई उपलब्ध हुने छ ।
भारतमा काेराेनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या १७ हजार नाघ्याे, एकैदिन ५ सय बढीकाे मृत्यु
काठमाडाैं, १७ असार । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बृद्धि हुँदै गइरहेको छ । अघिल्ला दिनहरुमा भन्दा पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक सङ्क्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अहिले एसियाकै महामारी केन्द्र बनिरहेकाे भारत विश्वमा काेराेना संक्रमित देशकाे लहरमा चाैथाे स्थानमा छ । एसियाली देशहरूमा भने सबैभन्दा बढी काेराेना भाइरसक संक्रमितहरू भारतमै फेला परेका छन् ।
अहिले भारतमा काराेनभाइरसबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या १७ हजार नाघेकाे । वर्डाेमिटर्सका अनुसार बुधबार बिहानसम्म भारतमा काेराेनाभइरसबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या १७ हजार ४१० पुगेकाे छ ।
पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा भारतमा ५ सय ६ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ भने १८ हजार २५६ जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन् । योसँगै देशभरी अहिलेसम्म सङ्क्रमितको संख्या ५ लाख ८५ हजार ७९६ पुगेकाे छ ।
अहिले भातरमा २ लाख २० हजार ३२८ जना सङ्क्रमित अवस्था मै रहेका छन् । तीमध्ये ८ हजार ९४४ जनाकाे अवस्था भने गम्भीर रहेकाे छ । त्यसैगरी ३ लाख ४७ हजार ८६३ जना सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन् ।
भारतमा पछिल्लो समयमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउदै लगिएको र परिक्षणको मात्रा पनि बढाइएकाले सङ्क्रमितहरुको संख्या धेरै देखिँदै गएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
Prevभर्खरै कतारबाट आयो निक्कै ठुलो दुखको खबर, के भयो तेस्तो ?
Nextअत्यन्तै दु:खद खबर : भर्खरै कोरोनाको कारण दक्षिण अफ्रिकामा नवजात शिशुको मृ’त्यु ! RIP !!!!
कुन-कुन राशीले कालो धागो बाधे भाग्य खुल्छ ? कुन राशीले बाध्नु हुदैन ?
स्याङ्जामा एम्बुलेन्स दुर्घटना : दुईको मृ त्यु, दुई गम्भीर घाइते
जान्नुहोस् कुन राशि भएका व्यक्तिले के मन्त्र जप्दा मिल्छ फल !